Nbudata FSP Boeing 747-400LCF Dreamlifter FSX - Rikoooo
FSP Boeing 747-400LCF Dreamlifter FSX -ekpo ọkụ
The Boeing 747 Large Ibu ugboibu (LCF), na-utu aha Dreamlifter bụ a gbanwetụrụ Boeing 747-400 eji ibufe na ugbo elu akụkụ si dị iche iche suppliers maka Boeing. Ọ bụ nke yiri nke Airbus A300-600ST kwuru "Beluga".
ikenyeneke mbiet add-on n'ihi na FSX nke njiri mara oke! Ihe ngwugwu a gụnyere ihe atụ 3D nwere ọtụtụ akụkụ na-agagharị, gụnyere ụgbọ ala na-ahụ ike (lee foto), jiri ogwe "Posky Utility" iji nweta ihe ngosi niile. Na-etinye ụda omenala site na ezigbo 747-400, akwa kobere siri ike na 2D (nke ndabara FSX) adabara ụdị a, mmetụta pụrụ iche, ọkụ abalị wdg. Biko gụọ ntuziaka maka ama ndị ọzọ
Onye edemede: Free Sky Project